Detoronomy 23 - Ny Baiboly
Detoronomy toko 23
Ny amin'ny olona tsy mahazo miharo amin'ny betsaka - Fahadiovan'ny toby - Didy madinika sasany.
1Tsy hisy olona haka ny vadin-drainy na hanainga ny firakofan-drainy.
2Izay torotoro vihy na tapa-pilahiana, dia tsy hiditra amin'ny fiangonan'ny Tompo. 3Ny teraka amin'ny fanambadiana mahadiso, dia tsy hiditra amin'ny fiangonan'ny Tompo. Na dia ny taranany fahafolo aza tsy hiditra ny fiangonan'ny Tompo. 4Ny Amonita sy ny Moabita dia tsy hiditra amin'ny fiangonan'ny Tompo, na dia hatramin'ny taranany fahafolo aza, dia tsy hiditra amin'ny fiangonan'ny Tompo na oviana na oviana; satria tsy tonga nitsena hanina sy rano anareo izy teny an-dàlana, fony hianareo nivoaka avy tany Ejipta: sady nampaka sy nanamby vola an'i Balaama, zanak'i Beora avy any Petora, any Mesopotamia, hanozona anao. 5Saingy tsy nihaino an'i Balaama Iaveh Andriamanitrao, fa nampody ny fanozonana ho tso-drano ho anao Iaveh Andriamanitrao, noho ny fitiavan'ny Tompo Andriamanitrao anao. 6Aza manan-draharaha amin'izay hahitany soa na hiadanan'izy ireo, na oviana na oviana, raha mbola velona koa hianao. 7Aza mankahala ny Edomita, fa rahalahinao izy; aza mankahala ny Ejipsiana, fa efa vahiny tany amin'ny taniny hianao: 8azo raisina hiditra amin'ny fiangonan'ny Tompo ny zaza nateraka avy amin'izy ireo, hatreo amin'ny taranaka fahatelo.
9Raha mandeha am-pitobiana hiady amin'ny fahavalonao hianao, dia fadio ny zava-dratsy rehetra. 10Raha misy olona tsy madio eo aminao noho ny zava-nahazo azy tamin'ny alina, dia hivoaka ny toby izy ary tsy hiditra ao amin'ny toby, 11fa handro amin'ny rano izy nony harivariva ary hahazo miditra ny toby rehefa maty ny masoandro. 12Aoka hisy toerana iray any ivelan'ny toby ka ao no hivoahanao, 13ary asio lapely iray ny fitaovanao hihadianao lavaka, rehefa hipetraka any ivelany hianao, ka nony avy eo, dia totofy ny fivalananao. 14Fa nandeha eo afovoan'ny tobinao Iaveh Andriamanitrao, mba hiaro anao ary hampanaiky resy ny fahavalonao eo anoloanao, ka tsy maintsy ho masina ny tobinao, ka tsy hahitan'ny Tompo zava-tsy mety ao aminao, mba tsy hialany aminao.
15Aza atolotra ny tompony intsony, ny andevo nilefa mialoka ao aminao. 16Aoka izy hitoetra eo aminao, eo amin'ny taninao, amin'ny toerana hofidiny, amin'ny anankiray amin'ny tanànanao, amin'izay mahafinaritra azy; aza mampahory azy hianao.
17Aoka tsy hisy mpijangajanga amin'ny zanakavavin'Israely, aza misy mijangajanga ny zanakalahin'Israely. 18Aza misy enti-manefa voady any an-tranon'ny Tompo Andriamanitrao, na ny tangim-behivavy janga na ny hofan'alikalahy, fa samy fahavetavetana eo imason'ny Tompo Andriamanitrao, ireo zavatra roa ireo.
19Aza mampanàna amin'ny rahalahinao na vola, na hanina, na zavatra hafa azo ampananaina. 20Ny olon-kafa firenena no azonao ampanànan-javatra, fa aza mba mampanàna amin'ny rahalahinao, mba hanambinan'ny Tompo Andriamanitrao anao, amin'izay rehetra hataonao, any amin'ny tany hidiranao hanananao azy.
21Raha mivoady amin'ny Tompo Andriamanitrao hianao, dia aza ela fanefa izany, fa raha tsy izany dia hampamoahin'ny Tompo Andriamanitrao mihitsy hianao ny amin'izany, ka hivesatra fahotana. 22Raha tsy mivoady hianao, dia tsy hisy fahotana ao aminao. 23Fa ny teny naloaky ny vavanao dia tandremo sy efao, araka ny voady nataonao an-tsitra-po tamin'ny Tompo Andriamanitrao sy notononin'ny vavanao.
24Raha miditra ny tanim-boaloboky ny namanao hianao, dia mahazo mihinam-boaloboka araka izay tianao sy hivoky amin'izany nefa aza misy hataonao an-tsobikinao. 25Raha mamaky tanim-barin'ny namanao hianao, dia mahazo mioty salohim-bary amin'ny tànanao, fa tsy hijinjanao amin'ny antsy ny varin'ny namanao. >